Igumbi labucala elineKitchen, iWifi ekhawulezayo enezinto eziphezulu - I-Airbnb
Igumbi labucala elineKitchen, iWifi ekhawulezayo enezinto eziphezulu
Igumbi lestudiyo elikhulu labucala elinendawo yokungena (i-UPS ixhaswa ngesantya esiphezulu se-Intanethi, amanzi ashushu elanga, Ikhitshi) enombala wayo omkhulu oluhlaza ovulekele esibhakabhakeni iBalcony - igadi, kwithafa lendlu epholileyo yegadi. Ihlala kwindawo ye-cum yoga, phakathi kohlaza olunethafa. Kufuphi nesecundrabad.
Ukufikelela kwiphiramidi-ukucamngca. Phumla kwaye uhlaziyeke kwindawo eyodwa ephakamisa umphefumlo. Kufuphi kakhulu kwiivenkile zokutyela, iikhefi, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuthenga. Ngokwesicelo sangaphambili ukutya okwenziwe ekhaya kuyafumaneka.
4.71 · Izimvo eziyi-38
Igumbi likhulu kwaye iVeranda inkulu ngakumbi. Ukhululekile kwi-4. Ineebhedi ezi-2 eziqhelekileyo kunye ne-sofa cum bed ekhoyo kwigumbi.